Oohinta Miyaa La Baahdaa? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Oohinta Miyaa La Baahdaa?
Oohinta Miyaa La Baahdaa?
Huteel aad uu yaab badan ayaa ku yaalla dalka Japan. Huteelkan ayaa lagu magacaaba huteelka oohinta Dumarka, waxaana uu leeyahay qol dumarka loo diyaariyay inay ku baroortaan.
Maamulka huteelkan oo lagu “Mitsui Garden Yotsuya” ayaa sheegay in Huteelkan oo ku yaalla Tokoyo uu leeyahay qol gaar u ah dumarka kaasi oo ay yaallan filmo iyo muuqaalo sawiro ah oo wadanha iyo dareenka gabadh wax ka bedelaya isla markaana ka oohinaya.
Wax kale oo uu sheegay in huteelku leeyahy koox iyagana loogu talo galay inay dumarka qolkaasi jooga ka nixyaan. Waxaana huteelku siiya dumarka qolkaasi kiraysta waraaqo aad qiimahooda u sareeyo oo ay iskaga biiyaan ilmada kuna daboolaan indhaha casaaday.
Maamulka Huteelka ayaa sheegay inay suuq wanaagsan ay haystaan madaama ay tahay oohintu wax loogu baahan yahay sida raashinkba loogu baahan yahay